'IPosi ngeke likwazi ukumelana nokuholela abantu isibonelelo sikahulumeni' | News24
'IPosi ngeke likwazi ukumelana nokuholela abantu isibonelelo sikahulumeni'
EKapa - UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi uBathabile Dlamini ngoMsombuluko uveze ukuthi isivumelwano phakathi kwePosi kanye nabe-South African Social Security Agency (Sassa) ngeke sisenzeka.
Lokhu kungenxa yokuthi i-South African Post Office (SAPO) ingakwazi ukukhipha amakhadi angu-2,4million kuphela ngonyaka esikhundleni samakhadi angu- 4,2 million ngonyaka.
UDlamini wenze lesi simemezelo esithangamini sabezindaba e-East London.
OLUNYE UDABA:Ngeke kuphazamiseke ukuholwa kwezibonelelo ngenxa yamakhadi - Sassa
Izingcweti zithi isizathu esidala lokhu wukuthi isikhungu sakwa-Sassa asihlelanga kusenesikhathi izindlela zokunqanda inkinga efana nalena esayibona ekuqaleni kwalo nyaka.
Lo Ngqongqoshe usho lokhu kulandela isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo esithi i-Sassa inikezwe izinyanga ezinhlanu ukuba iveze bonke abahlinzeki bomsebenzi abazothatha umsebenzi obuwenziwa yi-CPS njengoba isizokhishwa.
Manje sekuvela ukuthi iPosi ngeke likwazi ukuwuphatha wonke umsebenzi, kanti ngokusho kukaNgqongqoshe iPosi alinayo ilayisensi yamabhange eliligunyaza ukuba lithwale wonke lo msebenzi njengoba eyabo inemigomo nemibandela eyinqandayo, kubika iBusiness Report Online.